Myanmar Citizen Report Form
Passport Information	Requirements for Renewal of Passport
Download CV for New Passport
Download Citizenship Form
Download Photo Requirements
Download Sample of Photo
ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ဝင်ငွေခွန် ထမ်းဆောင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အခြားကောင်စစ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စမျာအတွက်လမ်းညွှန်ချက်
၁။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ မေလ (၇)ရက်နေ့တွင် ကူဝိတ်နိုင်ငံ၊ ကူဝိတ်မြို့တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သံရုံးကို စတင်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှ မြန်မာသံရုံးအနေဖြင့် ကူဝိတ်နိုင်ငံနှင့် ပင်လယ်ကွေ့ဒေသတွင်း နိုင်ငံများဖြစ်သည့် ဘာရိန်း၊ ကာတာ၊ အိုမန်၊ ယူအေအီး နိုင်ငံများတွင် အကြောင်းကိစ္စအမျိုးမျိုးဖြင့် ရောက်ရှိနေထိုင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိစ္စများနှင့် အခြားကောင်စစ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိနေပါသည်။
၂။ ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် ပိုမိုထိရောက်လျင်မြန်စွာနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား များ၏အကျိုး ပိုမိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများ အနေဖြင့် မြန်မာသံရုံးသို့ ဆောင်သွယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ခြင်း၊ မြန်မာ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့်အတူ တစ်ပါတည်းဆောင်ရွက်ပေးသည့် နိုင်ငံကူး လက်မှတ် အသစ်လဲလှယ်ခြင်းတို့အတွက် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားရန် ဖြစ်ပါသည်-
ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ခြင်း၃။ ပထမဦးဆုံးဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်သူများအတွက် လိုအပ်ချက်များ(၁) အခြေခံလစာဖော်ပြထားသည့် ကုမ္ပဏီမှစာ (မူရင်း) နှင့် မိတ္တူ(၂) လျှောက်လွှာ(၃) ကိုယ်ရေးရာဇဝင်(၄) ဓါတ်ပုံတစ်ပုံ(၅) နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူမြန်မာသံရုံး / ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနတို့၌ ယခင်ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ဖူးသူများလိုအပ်ချက်များ(၁) ယခင်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ဝင်ငွေခွန် ပြေစာ/ထောက်ခံချက် မူရင်း/မိတ္တူ(၂) လျှောက်လွှာ(၃) ကိုယ်ရေးရာဇဝင်(၄) ဓါတ်ပုံတစ်ပုံ(၅) နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ
[မှတ်ချက်။ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်၍ ပြည်ပ၌ အလုပ်လုပ်နေသူ အားလုံး သည် သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (ဧပြီ ၁ ရက်နေ့မှ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ) အလိုက် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ငွေခွန် ထမ်းဆောင်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ နှစ်လွန် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်များအတွက် ဒဏ်ကြေးငွေ ပေးဆောင်ရပါမည်။] ဝင်ငွေခွန်တွက်ချက်နည်း နမူနာ
- ဝင်ငွေခွန်မြန်မာနိုင်ငံစတင်ထွက်ခွာလာသည့်နေ့ မှ 18 AUG 2011 အထိ (________ လ)လစာ AED_______x_______ လ x ၁၀ % (ပုံသေ) = AED _______19 AUG 2011 မှ DEC 2011 အထိ (4½ လ) (အခွန်%လျှော့သတ်မှတ်ကာလ)လစာ AED_______x(4½ လ) လ x ၂ % (ပုံသေ) = AED _______ဒဏ်ကြေး ၁ % (ပုံသေ)မြန်မာနိုင်ငံစတင်ထွက်ခွာလာသည့်နေ့ မှ 2011 March အထိ (_____ လ)လစာ AED______ x_______ လ x ၁ % = AED5_______ ------------------- ဝင်ငွေခွန်နှင့် ဒဏ်ကြေးစုစုပေါင်း AED _________
Exchange Rate (1AED = 0.078 KD) (ဘာရိန်း 1BD=0.78KD ၊ အိုမန် 1OMR=0.75KD၊ ကာတာ1QR=0.079KD၊ စသည်ဖြင့် နိုင်ငံအလိုက် Exchange Rate များပြောင်းလဲမှု ရှိနိုင်ပါသည်) AED _______ x 0.078 KD(Exchange Rate) KD __________/-(အနီးစပ်ဆုံး KD =________/-)(က) Kuwaiti Dinar ဖြင့် ဝင်ငွေခွန် ကျသင့်ငွေ KD _________နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်/အသစ်ထုတ်ပေးခြင်း၄။ ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်သူများလျှောက်ထားခြင်းလိုအပ်ချက်များ(၁) သက်တမ်းတိုးပုံစံ လျှောက်လွှာ(၂) နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၃) ဝင်ငွေခွန်အကျေပေးဆောင်ထားသော ြေပစာ (အနည်းဆုံး December 2011 လကုန် အထိ ဝင်ငွေခွန်အကျေပေး ဆေင်မှသာ Passport သက်တမ်းတိုးမြှင်‌့/အသစ်ထုတ်ပေးခြင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။)(၄) ကိုယ်ရေးရာဇဝင်(၅) ဓါတ်ပုံနှစ်ပုံ (with soft copy) ဓါတ်ပုံဆိုင်ရာ အချက်အလက်များပူးတွဲ(၆) Machine Readable Passport အသစ်ထုတ်ပေးခြင်း ကူဝိတ်ဒီနာ ၃၀ (ပုံသေ)(၇) စာရွက်စာတမ်းကြေး/ Form Fees ကူဝိတ် ဒီနာ ၁.၅၀၀ (ပုံသေ)မှီခိုသူများမှ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးပါရန် လျှောက်ထားခြင်းလိုအပ်ချက်များ(၁) သက်တမ်းတိုးပုံစံ လျှောက်လွှာ(၂) နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ (၃) မှီခိုသူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား အပြည့်အစုံ(၄) မှီခိုခံရသူ၏ ယခုလအထိ ဝင်ငွေခွန်အကျေပေးဆောင်ထားသော ြေပစာ (၅) မှီခိုခံရသူ၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မိတ္တူ(၄) ကိုယ်ရေးရာဇဝင်(၅) ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံ (jpeg. soft copy with CD) ဓါတ်ပုံဆိုင်ရာ အချက်အလက်များပူးတွဲ(၆) Machine Readable Passport အသစ်ထုတ်ပေးခြင်း ကူဝိတ်ဒီနာ ၃၀ (ပုံသေ)(၇) စာရွက်စာတမ်းကြေး/ Form Fees ကူဝိတ် ဒီနာ ၁.၅၀၀ (ပုံသေ) ဓါတ်ပုံ soft copy အား CD ဖြင့် တရားဝင်ပေးပို့ပါက ပေးပို့ခဈေးကြီးခြင်း/ တရားမဝင် Passport ကြားအတွင်း ညှပ်၍ပေးပို့ပါ အကောက်ခွန်ဥပဒေနှင့်ညိစွန်း၍ သံရုံးမှ လိုက်လံရှင်းလင်းပေးရခြင်းတို့ကြောင့် ဓါတ်ပုံ Soft Copy အားပေးပိုရန် ခက်ခဲပါက ဓါတ်ပုံဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအတိုင်း သေချာစွာ စီစစ်ရိုက်ကူး၍ ကံယံကံရှင်၏ အမည်ြဖင့် File Name ပေး၍ သံရုံးသို့ e-mail ဖြင့်ပေးပို့ခြင်း၊ ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ အပိုထည့်ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ဝင်ငွေခွန်နှင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကျသင့်ငွေများ ပေးပို့ခြင်း၅။ မြန်မာသံရုံးသို့ ဝင်ငွေခွန်အပါအဝင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ခ နှင့် ကောင်စစ်ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ခများ ပေးပို့ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ မြန်မာသံရုံးငွေစာရင်းပါ အချက်အလက်များအပြည့်အစုံသို့ ဖော်ပြ၍ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ ကူဝိတ်ဒီနာ ၂.၀၀၀/- နှင့်အတူထည့်သွင်းပေးပို့သွားကြရန် ြဖစ်သည် -
ACCOUNT NAME : EMBASSY OF THE UNION OF MYANMAR, KUWAITKuwait Dinar Current Account No. 2002228366National Bank of Kuwait (Head Office Branch)IBAN No. KW87NBOK0000000000002002228366Swift Code. NBOK KW KW
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များနှင့် စာရွက်စာတမ်းများ ပေးပို့ခြင်း ၆။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများအား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပို့ရန် ဖြစ်သည် -
Embassy of the Republic of the Union of Myanmar Villa#35, Street 203, Block 2, Al-Salaam Area,South Surra, State of Kuwait.
(965) 25240736 Fax:(965) 2524 0749
08:00 a.m to 14:00 p.m (GMT +3hrs) Consular & Visa 09:00 to 13:00
(က) စာရွက်စာတမ်းများအား မိမိယုံကြည်စိတ်ချရသည့် အမြန်ချောပို့ဖြင့် သံရုံးသို့ အရောက် ပေးပို့ရန်ြဖစ်သည်။ (DHL / Fedex) (ခ) ယင်းသို့ပေးပို့ရာတွင် မိမိအသုံးပြုသည့် အမြန်ချောပို့လုပ်ငန်းသည် အသွား/အပြန် အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါက မိမိဘက်မှ စီစဉ်ဆောင် ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ (ဂ) အသွား/အပြန် စီစဉ်ရန် အဆင်မပြေသူများအတွက် မြန်မာသံရုံးမှ စီစဉ် ပြန်ပို့ပေးရန် အတွက် စာရွက်စာတမ်းခပေးပို့ရာတွင် အများဆုံးလူ(၃)ဦး အတွက်သာ အနည်းဆုံးသတ်မှတ်နှုန်း ကူဝိတ်ဒီနာ ၈.၅၀၀/- ဖြင့် ပြန်လည်ပေးပို့ နိုင်၍ လူ(၃)ဦးစာထက် ပိုမိုစုပို့ပါက ပိုမိုကျခံရပါမည်။ (ဃ) ဘဏ်သို့ ငွေပေးသွင်းပြီးပါက ငွေသွင်းပြေစာအား scan ဖတ်၍ e-mail/Fax ဖြင့် ပို့ပေးရန်(င) စာရွက်စာတမ်းများ ပြန်လည်ပေးပို့ရာတွင် မြန်ဆန်ထိရောက်စွာဖြင့် ပျက်စီးပျောက်ဆုံး မဖြစ်ပေါ်စေရန် Contact Name, Company, Address, Mobile No. & e-mail တို့အား စာအိတ်အလွတ်တစ်ခု (သို့မဟုတ်) စာရွက်အလွတ်ပေါ်တွင် တိကျစွာရေးသား၍ ထည့်ပေးပါရန်အထူးသတိပြုရန်အချက်၇။ ကောင်စစ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာသံရုံးအနေဖြင့် အတတ်နိုင် ဆုံး လျင်မြန်စွာဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် မိမိတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော ကောင်စစ်ကိစ္စရပ်များအတွက် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားကြရန် ဖြစ်သည် -(က) စာရွက်စာတမ်းပေးပို့မှုနှင့် ကောင်စစ်ဆိုင်ရာ အခကြေးငွေများ ပေးပို့မှုတို့ အတွက် သံရုံးသို့ ကိုယ်တိုင်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြရန်၊(ခ) မြန်မာသံရုံးမှ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုကို ဆောင်ရွက်ပြီးစီးနိုင်မည့် ခန့်မှန်းကာလ တွင်သံရုံးသို့ ကိုယ်တိုင်ဆက်သွယ်မေးမြန်း၍ ပြန်လည်ရယူရေးအတွက် စာပို့လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်ရန်(ဂ) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှိ အမည်၊ ပေးပို့သူအမည် နှင်‌့ ငွေလွှဲပို့သူအမည် စသည့် အမည် (၃)မျိုးစလုံး တူညီမှု ရှိမှသာ ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။ (ဃ) မြန်မာသံရုံးသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ဦးထိပ်ထား ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများအပေါ် အမြတ်ထုတ် မတရား အကျိုးစီးပွားရှာခြင်းမှ ကင်းလွတ်စေရေးအတွက် တစ်ဆင့်ခံ ကြားပွဲစားများ/ ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဆောင်ရွက်မှုများကို လုံးဝ(လုံးဝ) ဆောင်ရွက်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။(င) မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့်လည်း မြန်မာသံရုံးနှင့်အတူ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်သွားကြရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အဟောင်းများ ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း၈။ မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အသစ်ရရှိပြီး (၃)လအတွင်း နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အဟောင်းအား သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးသို့ စာနှင့်တကွ အမည်/လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ်/e-mail ပြည့်စုံစွာဖော်ပြ၍ပြန်လည်အပ်နှံရမည် ဖြစ်သည်။ သို့ပါ၍ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အဟောင်းမှ ဗီဇာသက်တမ်းအား နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီး ပါက သံရုံးသို့ နိုင်ငံကူးအဟောင်းများ မပျက်မကွက် ဆောလျင်စွာ ပြန်လည် အပ်နှံကြရန် အသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ မြန်မာသံရုံးကူဝိတ်မြို့
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၂ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ ရက်ဝင်ငွေခွန်တွက်ချက်နည်း ( နမူနာ )
မြန်မာနိုင်ငံစတင်ထွက်ခွာလာသည့်နေ့ မှ 18 AUG 2011 အထိ (________ လ) လစာ AED_______x_______ လ x ၁၀ % (ပုံသေ) = AED _______
19 AUG 2011 မှ DEC 2011 အထိ (4½ လ) (အခွန်%လျှော့သတ်မှတ်ကာလ) လစာ AED_______x(4½ လ) လ x ၂ % (ပုံသေ) = AED _______
ဒဏ်ကြေး ၁ % (ပုံသေ) မြန်မာနိုင်ငံစတင်ထွက်ခွာလာသည့်နေ့ မှ 2011 March အထိ (_____ လ) လစာ AED______ x_______ လ x ၁ % = AED5_______
-------------------ဝင်ငွေခွန်နှင့် ဒဏ်ကြေးစုစုပေါင်း AED _________
Exchange Rate (1AED = 0.078 KD) (ဘာရိန်း 1BD=0.78KD ၊ အိုမန် 1OMR=0.75KD၊ ကာတာ1QR=0.079KD၊ စသည်ဖြင့် နိုင်ငံအလိုက် Exchange Rate များပြောင်းလဲမှု ရှိနိုင်ပါသည်) AED _______ x 0.078 KD(Exchange Rate) KD __________/-(အနီးစပ်ဆုံး KD =________/-) Kuwaiti Dinar ဖြင့် ဝင်ငွေခွန် ကျသင့်ငွေ KD _________
Myanmar Embassy, Kuwait
Greetings from Ambassador Directions & MapHolidays & Office HoursEmbassy Account No.
Myanmar Embassy Websites
SAUDI ARABIA, RiyadhSOUTH AFRICA, PretoriaISRAEL, Tel AvivEGYPT, CairoUSA, Washington DCUSA, Los Angeles CGSWITZERLAND, GenevaFRANCE, ParisUSA, New yorkUK, LondonSINGAPOREMALAYSIA, Kuala LumpurBELGIUM, BrusselsJAPAN, TokyoINDONESIA, Jakarta (ASEAN)CHINA, Hong Kong CGTHAILAND, BangkokCHINA, BeijingRUSSIA, MoscowINDIA, New DelhiINDIA, Kolkata CGITALY, RomeCHINA, Kunming CGCHINA, Nanning CGGERMANY, BerlinBRAZIL, BrasiliaSERBIA, BelgradeAUSTRALIA, CanberraBANGLADESH, DhakaPAKISTAN, IslamabadVIETNAM, HanoiCANADA, OttawaKOREA, SeoulLAO, VientianeCAMBODIA, PhnompenhBRUNEI DARUSSALAM, Bandar Seri Begawan
Download Passport CV Form
Download Passport Renewable Form
Download Photograph Guidelines Download Photo Requirements
Sample Photo for Machine Readable Passport & Visa
President OfficeOffice of the State CounsellorPyithu HluttawUnion Election CommissionMinistry of Foreign AffairsMinistry of Labour, Immigration and PopulationMinistry of CommerceMinistry of FinanceMYANMAR INVESTMENT COMMISSIONUMFCCIMRTV-4Ministry of Hotels & TourismMinistry of InformationMinistry of EducationMinistry of Health and SportsMinistry of Agriculture, Livestock and IrrigationMinistry of Transport and CommunicationsEnglish to Myanmar and other language and Myanmar dictionary
You are here: Home consular Passport Information
Web Developer: Myanmars.NET, Yangon, Myanmar. © Copyright 2013 by Myanmar Embassy, Kuwait. Powered By T3 Framework